जुलाई 18, 2017 जुलाई 20, 2017 साइन्स इन्फोटेक0Comments टुप्पी, टुप्पी पाल्नु, बैज्ञानिक, बैज्ञानिक कारण
टुप्पी पाल्नुको बैज्ञानिक कारण के ? हिन्दूका संस्कार अनुसार शिरको केन्द्रस्थानमा नकाटी-नखौरी राखिने रौंलाई टुप्पी भनिन्छ । वैदिक परम्परा अनुसार कपाल काट्दा वा मुण्डन गर्दा मानिसहरुले टुप्पी राख्ने चलन छ । व्रतबन्ध गरेपछि हरेक बैदिक हिन्दु धर्मालम्बीहरुले टुप्पी राख्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पहिला-पहिला भनिन्थ्यो टुप्पी ब्राह्मणको पहिचान हो । प्राय: ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको मानिसको टाउकोमा लामो ‘टुप्पी’ हुने गर्थ्यो ।
मस्तिष्कको भित्री भाग जहाँ नाडीको मेल हुन्छ त्यहाँ पनि टुप्पीको सम्बन्ध हुन्छ । यसैले टुप्पीमा चोट लागेमा मानिसको छिटो मृत्यु हुन्छ । टुप्पीले मानिसहरुलाई विभिन्न रोग ब्याधीबाट समेत बँचाउने गरेको बताइन्छ । टुप्पील गर्मी वा चिसोबाट पनि बचाउँछ । शरीरको मुख्य भागलाई चिसो वा गर्मीबाट बचाँएर मानिसलाई स्वस्थ राख्न समेत टुप्पीको मुख्य भूमिका हुन्छ । टुप्पी रहेको स्थानमा शरीरका सबै ज्ञानेन्द्रिय अर्थात कान, नाक, जीव्रो, आँखा आदिको सम्बन्ध हुन्छ । यसले हात, खुट्टा, गुदद्वार लगायतमा समेत नियन्त्रण गर्छ । तसर्थ टुप्पी पाल्दा शारीरिक र मानसिक नियन्त्रण पनि सम्भव छ ।
मान्छेको शरीरमा विभिन्न तत्व रहेझैं पृथ्वीमा पनि विभिन्न तत्त्व छन् । पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश बाहिर छन् भने यी पञ्चतत्व मानव शरीरमा पनि भेटिन्छन् । स्वस्थ्य मानिसले २४ घन्टामा १७,२८० देखि २३,०४० पटक सास फेर्छन । शरीरका कोष संचालन गर्न मस्तिष्क र मुटुको भूमिका हुन्छ । यसलाई बाहिरी तत्वले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसमा शरीरका नौवटा प्वालहरूको भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी अप्रत्यक्ष द्वारका रुपमा मानिने नाभी र टुप्पीको पनि भूमिका हुन्छ । विज्ञानका अनुसार अन्तरिक्षबाट विभिन्न खाले परावैजनी किरण पृथ्वीमा झरिरहेका हुन्छन् । शिरको टुप्पोमा रहेको शिखाले नकारात्मक विकिरणलाई परावर्तन गर्न र सकारात्मक किरण मात्रै ग्रहण गरी शरीरमा पठाउँछ भन्ने व्याख्या गरिन्छ ।
← मानिस किन रुन्छ ?
मंगलसुत्र लगाउनाको वैज्ञानिक कारण के ? →
रक्षाबन्धन लगाउनुको बैज्ञानिक महत्त्व
अगस्ट 15, 2019 अक्टोबर 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2